फिफा उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डः रोनाल्डो र मेस्सीको भोट कसलाई ? – Gandaki Media
फिफा उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डः रोनाल्डो र मेस्सीको भोट कसलाई ?
Posted on September 25, 2018 Author By admin	Comment(0)
लुका मोडरिचले फिफा उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लिओनल मेस्सीको १० वर्षदेखि कायम रहेको दबदबा तोडे ।
२००७ मा काकाले जिते यता यो अवार्ड रोनाल्डो र मेस्सीले समान ५–५ पटक पाएका छन् । यूईएफए अवार्डमा आन्द्रे इनिष्टा र फ्राङ्क रिबेरी आउँदा पनि फिफामा रोनाल्डो वा मेस्सीले नै पाएका थिए ।
यो पटक भने मेस्सी अन्तिम तीनको मनोनयनमै परेनन् भने मोडरिकले रोनाल्डो र मोहम्मद सलाहलाई पछि परे ।
आफूले अवार्ड नजिते पनि मेस्सी र रोनाल्डो दुबैले अवार्डका लागि उत्कृष्ट तीन खेलाडी छनोट गरेका थिए ।
विश्वका सबै देशका कप्तान र प्रशिक्षकले यसरी नै तीन नाम छानेका थिए । मेस्सीले अर्जेन्टिना र रोनाल्डोले पोर्चुगलका कप्तानका रुपमा मत दिए ।
दुबैले मोडरिकलाई पनि मत दिएको पाइएको छ । मेस्सीले पहिलो मत नै मोडरिकलाई दिएका छन् । दोस्रो नम्बरमा एम्बाप्पेलाई राखेका उनले तेस्रो स्थानमा रोनाल्डोलाई मत दिएको पाइएको छ ।
रोनाल्डोले भने पहिलो नम्बरमा भारानेलाई राखेका छन् । दोस्रो स्थानमा मोडरिक र तेस्रो स्थानमा ग्रिजम्यानलाई मत दिएका छन् ।
Tagged क्रिष्टियानो रोनाल्डो, लिओनल मेस्सी
नेपाल फेरि पनि उपविजेतामै सीमित
Posted on October 8, 2018 Author By admin
२२ असोज, । साफ यु–१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल उपविजेतामै सीमित भएको छ । आइतबार राति भएको फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग १–० गोलले स्तब्ध भएको हो । भुटानको थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गरेपनि बंगलादेशलाई रोक्न भने सकेन । बंगलादेशका लागि मासुरा प्रभिनले गरेको गोल नै निर्णायक सावित बन्यो । पहिलो हाफमा दुबै टिमले गोलरहित […]
मोदी आउने दिन सार्वजनिक विदा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने दिन वैशाख २८ गते प्रदेश नं. २ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोे छ। प्रदेश नं. २ मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउने दिन प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलले जानकारी दिए। जनकपुरमा सम्बोधन गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यक्रममा सरकारले प्रदेशभित्रका आठवटै जिल्लाबाट […]
नेपालले टस जित्यो, अफगानिस्तानलाई फिल्डिङको निम्तो
Posted on October 1, 2018 Author By admin
१५ असोज, । बंगलादेशमा जारी एसीसी यु–१९ एसिया कप क्रिकेटमा अफगास्तिानविरुद्ध नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेसँगै अफगानिस्तानले बलिङको निम्तो पाएको छ । खेल केहीबेरमा सुरु हुदैछ । समूह ए मा रहेका नेपाललाई अफगानिस्तानविरुद्धको खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । आफ्नो पहिलो खेलमा नै भारतसँग १७१ रनले पराजित भएको […]
पितृ श्राद्ध किन गर्ने ? श्राद्ध नगर्दा के हुन्छ ?
पोखराको पुम्दीभुम्दीमा हिजोदेखि हराएकी बालिका मृतअवस्थामा फेला